Izvo zvekushongedza zvinhu zvisingakwanise kushayikwa mumba mako | Bezzia
Susana Garcia | 17/05/2021 20:00 | Zvishongedzo zvekumba, Decoration
Kana tichishongedza kona yega yega, tinogara tichipedza zuva tichifunga nezve chii chingave chiri nani, vhasi? Chirimwa? kana kuisiya sezvairi. Iko hakuna chakanyorwa mune iyo nyaya ye kushongedza nekuti icho chinhu chakasununguka, ine akawanda masitaera uye zvinhu zvakawanda zvaunogona kuwedzera zvichienderana nekuravira kwauinako. Pfungwa ndeyekugadzira nzvimbo yaunoda uye inoenderana nezvaunoda.
ari zvekushongedza zvinhu zvakapfekwa nhasi Panogona kuve nezvakawanda, saka tiri kuzokuudza nezve zvimwe zvaungade uye zvausingakwanise kupotsa mumba mako. Nakidzwa nemazano aya kuti upe chekupedzisira pakubata kwako, nekuti nzvimbo dzese dzinoda kubata kwakakosha kunoita kuti vazove chakasiyana uye chakasarudzika.
1 Mavara akapusa akaumbwa
2 Chinhu chemazambiringa
3 Minimalist mifananidzo
4 Iyo vhasi ine maruva matsva
5 Wicker mabhasikiti
Mavara akapusa akaumbwa
Chimwe chezvinhu izvo zvinogona kukubatsira iwe kupa chakasarudzika kubata kukona, tafura kana chikamu chiri pamusoro pechoto ndiwo mavhasi. Mazuva ano iwe unogona kuwana mazana acho aine akasiyana maumbirwo. Pasina kupokana maitiro atinogona kuona ndeyekutenga akati wandei mavhasi eakareruka maumbirwo uye minimalist kana Nordic maitiro uye kuvasanganisa. Symmetry haina kumbotsvagwa sezvo pfungwa iyi isisatakurwa. Kusanganisa itsika, kunyangwe ichifanira kuita kumwe kubatana muchitaera nematoni. Kana tikashandisa matoni asina kwazvakarerekera, tinofanirwa kuenderera tichizvishandisa kana kuwedzera imwe ine ruvara rwakatanhamara. Pfungwa iyi ndeyekushongedza nemavhasi uye kuti ivo ndivo protagonists nekuda kweakanaka maumbirwo nematoni.
ari zvidimbu zvevintage zvakapfeka zvakanyanya uye zvakare zvine mhando kuti vanotaridzika zvakanaka munzvimbo zhinji. Funga semuenzaniso wenguva yakanaka yeawa, vintage foni kana girazi. Dzese dzinogona kuiswa munzvimbo ine chazvino, Nordic kana chishongo chebohemian uye vanozotaridzika kunge vakanaka. Uye zvakare, zvinhu zvemazambiringa zvine nhoroondo yavo uye zvinokosheswa. Iwe haufanire kukanda chero kure kana uchigona kuvawana vakatenderedza imba yako kana nzira dzekutsvaga, sezvo paine zvinoshamisa, zvemhando yepamusoro zvinhu. Iri kupa hupenyu hutsva kuchinhu chakazvimiririra pachacho.
Shongedza na kupenda ndeimwe yemaitiro makuru atinogona kuona mudzimba. Pane mazano mazhinji mupfungwa iyi asi tinoona imwe ichidzokororwa. Minimalist pendi iri pano kuti igare nekuti tinogona kusanganisa akawanda nekureruka kukuru. Iyi pendi inoshandisa maumbirwo akareruka nematoni ekutanga senge nhema, chena kana beige, izvo zvinoita kuti zvive nyore kusanganisa. Kana iwe uchida iyi mhando yekushongedza, iwe unogona kugadzira yakakura kuumbwa kwekupenda uye kusimudzira chero chero rusvingo mumba mako navo.
Iyo vhasi ine maruva matsva
Zvirokwazvo mumaakaundi mazhinji e Instagram maona vazhinji vema blogger vachishandisa maruva uye mamwe maruva uye vachitotora akawanda mifananidzo yemaruva emaruva emarudzi mazhinji. Kukoshesa runako rwemaruva chinhu chinoitwa zvakare uye nekuda kweichi chikonzero tinokurudzirawo kuti kana iwe uchida imba ine yakakosha bata, tsvaga nzvimbo yaunogona kutenga maruva nemutengo wakanaka. Vhasi rine maruva echisikigo rinotora mazuva mashoma asi iro rinonyatso kuwedzera runako uye runako kubata kune yako imba yese. Maruva anogara achigadzira mamiriro erunako ayo akaoma kuenderana.
Iwo mabhasiketi chidimbu chinoshanda kwazvo, nekuti iwo anotibatsira kuchengetedza zvinhu, asi zvakare ane runako rwawo. Kunyanya kana tiri kutaura nezve iwo anotonhorera wicker matengu, ayo anoshandiswa kushongedza makona. Kune marudzi mazhinji, akatopendwa kana nemhete kuti ape kara diki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Izvo zvekushongedza zvinhu zvisingakwanise kushayikwa mumba mako
Kuzvikoshesa kunokanganisa sei vaviri vacho